လမျးတှလြှေောကျနပေမေယျ့လဲ – One Daily Media
လမျးတှလြှေောကျနပေမေယျ့လဲ ဘယျကိုလြှောကျနမှေနျးမသိဖွဈလာတတျတယျ …
အဲ့ဒီအခြိနျတှကွေုံလာတဲ့အခါ စိတျဓာတျတှကေလြာတတျသလို ကိုယျ့ဆုံးဖွတျခကျြတှကေလဲ မသမေခြာ မရမေရာတှေ ဖွဈလာတတျတယျ
အဲ့လိုအခြိနျတှေ ကွုံနရေမယျဆိုရငျ … ခဏ ဘာမှမလုပျပဲ ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျရှာကွညျ့တတျဖို့လိုတယျ ငါ ဘာဖွဈခငျြခဲ့တာလဲ ဆိုတဲ့ အိပျမကျ … ငါ ဘာလုပျခငျြခဲ့တာလဲ ဆိုတာ ဝါသနာ တဈခုခုကို ပွနျရှာပါ အဲ့ဒီတုနျးက စိတျကူးခဲ့ဖူးတဲ့ အနာဂတျကို ပွနျတှေးပါ ….
ဒီလမျးကို လြှောကျဖို့ဘာကွောငျ့ရှေးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြကို ပွနျရှာတှဖေို့လိုတယျ … မစခငျက ဆငျဖမျးမယျ ကြားဖမျးမယျဆိုပွီး ကိုယျတကယျစလုပျတဲ့အခါ ကိုယျထငျသလောကျ မပေါကျတဲ့ ခရီးတှကေို နောကျလှညျ့ပွနျဆုတျလို့မရဘူး
နယျပယျတဈခုခုမှာ အလုပျတဈခုခုမှာ ကြှမျးကငျြတတျမွောကျလာဖို့ဆိုရငျ အခြိနျလိုတယျ ဇှဲ လုံ့လလိုတယျ ပွီးရငျ .. အရှုံးကို လကျသငျ့ခံနိုငျမယျ့သတ်တိတှလေိုတယျ … ကိုယျလြှောကျနပေမေယျ့ ထငျသလောကျမရောကျတဲ့အခါ လူတျောတျောမြားမြားတှေးကွတာက နောကျလှညျ့သှားဖို့ပဲလေ
အဲ့လိုနညျးနဲ့သာလြှောကျနမေယျဆိုရငျတော့ ဘယျခရီးမှရောကျတော့မှမဟုတျဘူး လမျးတှပြေောကျနတေယျလို့တှေးမိတဲ့အခါ ကိုယျလြှောကျခဲ့တဲ့အိပျမကျတှကေို ပွနျရှာတှဖေို့ အခြိနျဆိုတာလိုပါတယျ ….
ပွိုလဲသှားလို့မရသလို နောကျပွနျလှညျ့သှားတော့မယျလို့ မတှေးနဲ့ ကိုယျလြှောကျခဲ့တဲ့လမျးကို ကိုယျကိုယျတိုငျပဲ ဆုံးအောငျ လြှောကျရမယျလေ ….
လမ်းတွေလျှောက်နေပေမယ့်လဲ ဘယ်ကိုလျှောက်နေမှန်းမသိဖြစ်လာတတ်တယ် … အဲ့ဒီအချိန်တွေကြုံလာတဲ့အခါ စိတ်ဓာတ်တွေကျလာတတ်သလို ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကလဲ မသေမချာ မရေမရာတွေ ဖြစ်လာတတ်တယ်
အဲ့လိုအချိန်တွေ ကြုံနေရမယ်ဆိုရင် … ခဏ ဘာမှမလုပ်ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ရှာကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ် ငါ ဘာဖြစ်ချင်ခဲ့တာလဲ ဆိုတဲ့ အိပ်မက် … ငါ ဘာလုပ်ချင်ခဲ့တာလဲ ဆိုတာ ၀ါသနာ တစ်ခုခုကို ပြန်ရှာပါ အဲ့ဒီတုန်းက စိတ်ကူးခဲ့ဖူးတဲ့ အနာဂတ်ကို ပြန်တွေးပါ ….
ဒီလမ်းကို လျှောက်ဖို့ဘာကြောင့်ရွေးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို ပြန်ရှာတွေ့ဖို့လိုတယ် … မစခင်က ဆင်ဖမ်းမယ် ကျားဖမ်းမယ်ဆိုပြီး ကိုယ်တကယ်စလုပ်တဲ့အခါ ကိုယ်ထင်သလောက် မပေါက်တဲ့ ခရီးတွေကို နောက်လှည့်ပြန်ဆုတ်လို့မရဘူး
နယ်ပယ်တစ်ခုခုမှာ အလုပ်တစ်ခုခုမှာ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်လာဖို့ဆိုရင် အချိန်လိုတယ် ဇွဲ လုံ့လလိုတယ် ပြီးရင် .. အရှုံးကို လက်သင့်ခံနိုင်မယ့်သတ္တိတွေလိုတယ် … ကိုယ်လျှောက်နေပေမယ့် ထင်သလောက်မရောက်တဲ့အခါ လူတော်တော်များများတွေးကြတာက နောက်လှည့်သွားဖို့ပဲလေ
အဲ့လိုနည်းနဲ့သာလျှောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်ခရီးမှရောက်တော့မှမဟုတ်ဘူး လမ်းတွေပျောက်နေတယ်လို့တွေးမိတဲ့အခါ ကိုယ်လျှောက်ခဲ့တဲ့အိပ်မက်တွေကို ပြန်ရှာတွေ့ဖို့ အချိန်ဆိုတာလိုပါတယ် ….
ပြိုလဲသွားလို့မရသလို နောက်ပြန်လှည့်သွားတော့မယ်လို့ မတွေးနဲ့ ကိုယ်လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ဆုံးအောင် လျှောက်ရမယ်လေ ….